दिल्ली पुगेर नविना लामाले भनिन्, ‘नाकाबन्दी किन लगाइयो ? हामी त्यसको उत्तर चाहन्छौं’ – America Nepal
दिल्ली पुगेर नविना लामाले भनिन्, ‘नाकाबन्दी किन लगाइयो ? हामी त्यसको उत्तर चाहन्छौं’
पुस १२, २०७३- नेपाल र भारतका विभिन्न राजनीतिक दल सम्वन्ध युवा नेताहरुको बीचमा दुई देशको सम्वन्धलाई कसरी अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको हलमा भएको छलफलमा दुई देशका विभिन्न राजनितिक दल सम्वन्धी विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले नेपाल र भारतको सम्वन्धलाई दीर्घकालिन रुपले अगाडी वढाउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए । उनले नेपालको वास्तविक अवस्थाको वारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले भारतका युवा नेताहरुसँग छलफल थालिएको समेत जानकारी दिए । महरले नेपाल समृद्ध र राजनितिक रुपले स्थीर नभएमा भारत र चीन दुवैलाई असर गर्ने भएकाले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने वताए ।
एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष नविना लामाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले अनावश्यक रुपमा चासो लिएको भन्दै नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् । उनले भारतका युवा नेताहरुलाई संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा किन नाकाबन्दी लगायो भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली युवाहरुले खोजिरहेको बताइन्। ‘गत वर्ष नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले किन नाकाबन्दी लगायो, हामी त्यसको उत्तर चाहन्छौं ।’ उनले नेपालले भारतले विगत ७० वर्षको विचमा निकै नै सहयोग गरेको समेत बताइन् । लामाले भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई हेर्ने नीति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भन्दै भारतीय युवा नेताको ध्यानाकर्षण गराइन ।
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका युवा नेतृ मानुषी भट्टराई कुटनितिको कुरा गर्दा आर्थिक नीतिलाई ध्यान दिनुपर्ने वताइन् । उनले नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य कामदारले भारतमा निकै समस्या भोग्नु परेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न भारतिय विद्यार्थी नेताहरुलाई आग्रह गरिन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका युवा नेता मनिष मिश्रले नेपाल चीन र भारतको चेपुवामा परेको भन्दै वताए । उनले नेपाल र भारतका युवा नेताहरुका विचमा निरन्तर भ्रमण आदानप्रदान आवश्यक भएको बताए ।
भारतको विपक्षी दल इन्डियन काँग्रेसका युवा नेता नदीम जावेदले नेपालमा कुनै समस्या आइपर्दा सहयोगका लागि सवैभन्दा पहिला भारत नै अगाडी सर्ने बताए । सो कार्यक्रममा भारतका युवा नेताहरुले नेपालमा वढ्दो चिनियाँ प्रभावको बारेमा चासो प्रकट गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भारतीय युवा नेताले भारतले नेपालमा केही सहयोग गनए चाहे पनि चीनले रोक्ने गरेको समेत वताएका थिए । सो कार्यक्रमा भारतिय जनता पार्टीका एक युवा नेताले गन वर्षको भुकम्पको समयमा भारतले तत्काल सहयोग गर्न खोजेपनि चीनले प्रभावमा सहयोग सामाग्री समयमा लान नदिएको वताएका थिए । उनीहरुले नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्वन्धमा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष आएर त्यसलाई विगार्न नहुने समेत बताएका थिए ।